ရှန်ကျန်း KTC နည်းပညာ Group မှ - R & D Dept. ဖို့နိဒါန်း
ကုမ္ပဏီ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့အဟောအပွောကောငျး လုပ်ငန်းယဉ်ကျေးမှု ဂုဏျလက်မှတ် အမှတ်တံဆိပ်ပုံပြင် သမဝါယမ Mode ကို စက်ရုံဓာတ်ပုံများ ဗီဒီယိုနိဒါန်း န်ထမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောလှုပ်ရှားမှုများ KTC ၏သီချင်း
LED TV ကို
75 " 65" ၅၈ " 55 " 50" , 49 " , 43" 40 " 39" 32 " 24" 22 "
interactive Flat Panel ကို CCTV စောင့်ကြည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်တီဗီ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ် Professional က Monitor
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ display ကို
PACS Intergrated ပြရန်
တိုင်ပင်ဆွေးနွေး Display ကိုရေးစင်တာ
ultrasound Image ကိုပြရန်
multi ရာထူးအမည်ကနျြးမာရေး Detector
LED TV ကို ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပြရန် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြရန်
တီဗီ R & D Dept.
R & D ဖွဲ့စည်းပုံ Dept. R & D လျှပ်စစ် Dept. R & D ဆော့ဝဲ Dept. R & D ကုန်ပစ္စည်း Dept.
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် R & D Dept.
R & D Dept. ဖို့နိဒါန်း
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ R & D Dept.
ဆက်သွယ်ရန်သတင်းအချက်အလက် ဘဏ်ပြန်ကြားရေး တိုင်ပင် & တိုင်ကြား မြေပုံ (KTC ရှန်ကျန်း) မြေပုံ (KTC Huizhou)
မူလစာမျက်နှာ / R & D Center က/ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် R & D Dept./ R & D Dept. ဖို့နိဒါန်း
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Display ကိုနည်းပညာ R & D ဦးစီးဌာနဖွဲ့စည်းမှုအသင်း, လျှပ်စစ်အသင်းနှင့် software အသင်းနှင့်အတူပါဝင်သည်ရသောစီးပွားဖြစ် display တွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထူးပြု, အုပ်စုအောက်တွင် R & D စနစ်၏ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ စာရွက်သတ္တုလူမီနီယံနှင့်ပလပ်စတစ်မှိုလုပ်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းပုံမှာ; စီးပွားဖြစ် display ကိုလယ်ပြင်၌တစ်ခုလုံးကိုပင်မအရွယ်အစားဖုံးအုပ် 110 -inch အရွယ်အစား 17 -inch ထံမှဒီဇိုင်းအရွယ်အစား, ။
၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူတက်ကြွစွာပါထိုကဲ့သို့သော Mstar, Realter, ST, ရာဇမတ်ကွက်, အားလုံး Winner, ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမအဖြစ်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားကြီးမားသောအစီအစဉ်ကိုကုမ္ပဏီများ, အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။ အုပ်စုရဲ့အခြေခံနည်းပညာကိုပေါင်းစပ်အပေါ်အခြေခံပြီးစီးပွားဖြစ် display ကိုထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးဖွံ့ဖြိုးဆဲ။
ကုမ္ပဏီ၏ဟာ့ဒ်ဝဲပလက်ဖောင်းများ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူကျနော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာ R & D အသင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏မောင်းနှင်အားဖြစ်ရပြီဖြစ်သောဖောက်သည်များ၏မတူကွဲပြားသောတောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့, LCD ကို whiteboard ဆော့ဖ်ဝဲ, ကြော်ငြာဆော့ဖ်ဝဲ, video conferencing software နှင့်ချုပ် software ကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါများတွင်အသုံးပြုသည့်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင် display ကိုထရံကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်, မော်နီတာ, ထိတွေ့ display ကိုထုတ်ကုန်ကို kiosk ရေစိုခံရုပ်မြင်သံကြားနှင့် Android ကို dual system ကိုထုတ်ကုန်အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားစီးပွားဖြစ် display ကိုထုတ်ကုန်: ဤတရားလေးပါးနှစ်များတွင်ကျနော်တို့ကဲ့သို့သောစျေးကွက်မှထုတ်ကုန်များကိုမိတ်ဆက်ပါပြီ လုံခြုံရေး, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, စစ်တပ်, စက်မှုလုပ်ငန်း, ပညာရေးနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ: အဖြစ်လယ်ကွင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်စျေးကွက်ဝေစုအနိုင်ရလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ R & D စွမ်းရည်ကိုပြသ, အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအဓိကလူသိများလုပ်ငန်းများနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပမှာစီးပွားဖြစ် display ကိုကုမ္ပဏီများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမိတ်ဖက်များအတွက်ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်။
CRM system ကို
မူပိုင်ခွင့်© 2019 Shenzhen KTC Technology Group All Rights Reserved ။
E-mail ကို ဆိုက်ကိုမြေပုံ အသုံးပြုမှုစည်းကမ်းချက်များကို သီးသန့်လုံခြုံရေးမူဝါဒအ